WINE 6.5 inouya neyakavandudzwa OpenCL uye IE rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki mbiri mushure vhezheni yapfuura uye ichokwadi kusarudzwa kwayo kwevhiki mbiri, WineHQ ichangobva kuburitsa vhezheni itsva yekuvandudza software yayo yekumhanyisa Windows mafomu pane asiri-Microsoft anoshanda masystem. Kunyanya, izvo zvatinogona kutora kare WAINI 6.5, uye seimwe yekutanga mune dzino nhevedzano, yakauya neshanduko dzakanaka, kupfuura zvakajairika kunyangwe pakutanga.
Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, WINE 6.5 yakagadzirisa 29 bugs, asi chinonakidza chiri pazasi, kwaunogona kuona kwete isingasviki 414 shanduko. WineHQ inowanzo simbisa chete mashoma mashoma maficha seakanyanya kukosha, uye vhiki ino vakataura kuti vakavandudza rutsigiro rweIE. Pazasi iwe une iyo runyora rwemashoko vakatipa vhiki ino.
WINE 6.5 inosimbisa
Tsigiro yeOpenCL yakagadziridzwa kuita vhezheni 1.2.
Yakawedzera rutsigiro rweEE inoenderana modes muMSHTML.
Rakawanda basa muRichEdit isina mahwindo.
Mamwezve anotsvedza kubva raibhurari yeWinRT.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.5 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.6, uye ichanyatso kusvika Chishanu chinotevera, Kubvumbi 9, sezvo WineHQ isina kunyatso kuzivikanwa nekusiyana kwekarenda. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.5 inosvika neyakavandudzwa OpenCL uye IE rutsigiro uye inopfuura mazana mana shanduko